FY 2018 - Wadashaqaynta Tucson Pima si loo joojiyo Hoylaawe
Marka loo eego TPCH Codsiga Soo-jeedinta iyo Codsiga Dhammaan Mashaariicda Cusub (Abaalmarin, Gunno DV, Ballaadhin iyo mid Cusub oo laga bilaabo Dib-u-dejinta), lifaaqa Codsi la buuxin karo ayaa lagu bixiyaa labada nooc ee MS Word iyo Adobe Acrobat.
Iyadoo aan loo eegin qaabka la adeegsaday, dhammaan codsadayaasha waa inay ku faylgareeyaan faylka magaciisa mashruuca. Ex: Lifaaqa B_MyProject una gudbi dukumintiga oo ah PDF. Ha u soo celin dukumenti la iska baadhay.
Xusuusin: Nooca loo yaqaan PDF wuxuu u muuqdaa inuu sifiican ula shaqeynayo Adobe Acrobat Pro.
Sida ku xusan TPCH ee Qiimeynta iyo Nidaaminta FY 2018, Lifaaqyada B, C iyo D: Foomka Mashruuca R & R, Foomka Rafcaannada iyo Warqadda Tusaalaha Isukeeniska
Codsadayaashu waa in ay adeegsadaan foomamka B iyo C ee hoose oo ay ku magacaabaan faylka magacooda mashruuca. Ex: Lifaaqa B_MyProject.pdf. U gudbi dukumintiga sidii PDF ah. Ha u soo celin dukumenti la iska baadhay. Lifaaqa D waxaa loo bixiyaa sidii dokumenti MS Word ah si looga caawiyo codsadayaasha inay bilaabaan xarfahooda ciyaarta.
TPCH 2022 Sii wadida Gudiga Daryeelka iyo Doorashada Guddiga
Shirarka Golaha Guud/Sannadka TPCH May 12, 2022
Warsidaha TPCH - Abriil 2022
Ku Dadaalida Dhanka Cadaalada Jinsiga Arrinta #9 - Qabashada Socdaalka, Sii Wadida Shaqada